Nhau - ASGA 2017 kuVietnam
Iyo ASGA Show kuVietnam yaive budiriro huru gore rino futi. Michina yedu yekudziya yekupisa zvakare yakafarikanya mukurumbira senge zvataitarisira. Sezvinoenderana nekudyiwa kwavo, isu tinoisa muchina wehupfumi nemitengo yakanaka kusangana nezvinodiwa. Uye fungidzira chii, pazuva rekutanga rehuratidziro, takaita kutengesa ipapo nechero chekutengesa kwedu, zvinoshamisa sezvo tichifanira kudzokera kumachina kuChina mushure mekutengesa show iyo zvakare inogadzira chivimbo chekutengesa kwedu futi! Tichakuchengeta iwe unyore pane inotevera show kana tikaronga kuenda zvakare.
Trade show inogara iri chikuva chakanaka chekuratidzira masimba ako, asi kwatiri handiyo chete iyo ajenda. Mushure mekutengesa show, isu tinoita purogiramu yekushanyira mijenya yevatengi munzvimbo mavo. Hukama nevatengi vedu vemuno hwave padhuze mushure mekusangana navo uye nekushanyira zvivakwa zvavo. Kudzidza zvakawanda nezve yavo bhizinesi zano uye musika zano, isu tinoita zvishoma kugadzirisa kugadzirisa kutengesa muVietnam. Isu tinotenda zvakasimba kuti musika mukukura muVietnam nekukurumidza sezvo machira eindasitiri ari kupisa muVietnam. Iyo ipuratifomu yakanakisa yekuita hurukuro huru pakati pedu nemutengi ichienderera.
Kwatiri iko kusangana nevanhu vatsva uye kudyidzana nevanhu vanonakidza kuti tipe vatengi vedu chinhu asi chakanakisa. Tinotenda munhu wese kunyanya yedu Asiaprint Chikwata, chakatora chikamu ichi kuratidza Smashing Hit. Pasina ivo, isu hatigone kubata yakadaro inobudirira uye inoshamisa show. Asi isu tinoda kuendesa edu Akakosha Kutenda kune edu Akakosheswa uye Anotitsigira Vatengi, pasina avo isu hatingave tiri. Kuvimba kwako nerutsigiro zvinotininipisa nguva dzese uye isu tinongoshuvira kuti dai isu tinogona kukutsigira iwe kumashure nekubatsira rako bhizinesi kukura.
Isu tiri nyanzvi mukugadzirwa kwe "Asiaprint" mhando kupisa kupisa michina uye yekudhinda machineries. Kambani yedu inotarisa pakuunzwa kwehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye kuiswa kweyakaomarara mhando kudzora. Midziyo yedu, iyo yakakwana, yakanaka uye ine mutengo wakaderera, yatengeswa pasirese nyika uye yakanakidzwa nemukurumbira mukuru pakati pevashandisi vazhinji. Midziyo yekuchinjisa kupisa: michina yekudziya yekudziya, inodzungudza musoro kupisa michina yekudhinda, pneumatic kupisa kutamisa michina, hydraulic kupisa yekudhinda michina, uye roller kupisa kupisa michina; Midziyo yekudhinda: mapaipi anomhanyisa mapombi, furu roller michina yekutsikirira, michina yekudhinda-pasi, uye michina yekukwikwidza yechiratidziro inokodzera kushandiswa kwekudhinda, mafekitori ekupfeka nemamwe maindasitiri. Jiangchuan anovimbisa kuti kugutsikana kwako kuchave kuri kwedu kutsvaga, uye isu tinokupa iwe yakanakisa sevhisi kuburikidza nehunyanzvi tekinoroji uye yekutanga-kirasi michina. Asiaprint inotarisira kumisikidza hurefu-hwakareba, hwakagadzikana, uye hwechokwadi kudyidzana hukama neshamwari dzedenderedzwa dzese.